Nkwakọ ngwaahịa Express kacha mma na igwe nrụpụta aha na ụlọ nrụpụta | UBL
Express igwe nkwakọ ngwaahịa na labeling igwe
Igwe ịchekwa azụ, nke a na -akpọkarị eriri eriri, bụ iji ngwaahịa na -ejikọ teepu ma ọ bụ katọn nkwakọ ngwaahịa, wee mezie ma tụgharịa ọnụ abụọ nke ngwaahịa eriri ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa site na mmetụta ọkụ nke igwe.
Ọrụ nke igwe ịkpa akwa bụ ime ka eriri plastik dị nso n'elu ngwugwu agbakwunyere, iji hụ na ngwugwu ahụ agbasaghị na njem na nchekwa n'ihi na ngwugwu adịghị akwụsi ike, n'otu oge ahụ, ọ kwesịkwara ịdị dị mma nke ukwuu ma dịkwa mma!
A na -ejikarị ya maka ịkwakọba katọn, ngwugwu akwụkwọ, igbe willow, ngwugwu akwa na ngwaahịa ndị ọzọ na azụmaahịa, nzipu ozi, ụgbọ okporo ígwè, ụlọ akụ, nri, ọgwụ, akwụkwọ na ụlọ ọrụ nkesa akwụkwọ akụkọ.
Ngwaahịa a bụ ngwaahịa echekwara nke igwe eji egosipụta ngwa ngwa nwere ọgụgụ isi nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara, nke emebere maka ndị ọrụ lọjistik e-commerce. Igwe ahụ dum dabere na kọmpụta njikwa ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ dị elu, ma na-enye ngwọta agbakwunyere dị ka nyocha akpaaka, ịtụle akpaka, ihe nkiri akara, mbipụta akpaka, na usoro ịgbapụta akpaka akpaka. N'otu oge ahụ, anyị nwere ike ịnye sistemụ ERP bụ isi yana sistemụ WMS dabere na mkpa ndị ahịa. Anyị na -enye ngwọta zuru oke maka mbupu ngwugwu ngwongwo ihe nkiri plastik maka ndị ahịa.
Mgbe ịtinye teepu mbukota, igwe nwere ike mezue usoro njikọta nke teepu mkpokọta, akara okpomoku, ịkpụ na ịtọghe teepu.
Ọsọ ọsọ na -arụ ọrụ ngwa ngwa, arụmọrụ dị elu, oge - yana ịchekwa ndị ọrụ, yana ịdị mma nke ukwuu dị elu. mara mma.
1. Iji gbochie omume nke mpempe akwụkwọ awara awara, sistemụ na -emepụta ozi mpempe akwụkwọ ihu na -ebipụta na -ebipụta na -akpaghị aka na -enweghị ntinye aka.
2. Naanị otu onye nwere ike rụọ ọrụ, akpa 1100 nwere ike kwakọba kwa elekere.
3. Jiri teknụzụ kpochapụ ihe egwu static, rụọ ọrụ nke ọma na ntụkwasị obi, melite arụmọrụ ọrụ.
4. mgbochi ntụtụ, mgbochi akpụkpọ anụ, mgbochi misoperation, nchekwa iji.
5. Enwere ike nweta ngwugwu awara awara na naanị square mita 1.5.
Nkọwa akpa akpa
Mpịakọta ihe nkiri PE: dayameta MAX300mm, ọkpụrụkpụ ihe nkiri 0.05-0.1mm, obosara ihe nkiri MAX700mm
Gosipụta nha nha
Obosara MAX100mm, ogologo MIN100mm.180mm, ma ọ bụ ahaziri ya
1100 ngwugwu / elekere
Useké, ihuenyo mmetụ, ahụigodo mebere
7/Ngosipụta nke 12-inch LCD
Nweta nkwurịta okwu
Njikọ Ethernet, USB, RS232
AC220V, Ike 50/60Hz: 1.5kW
Ogologo: 1580mm Obosara: 850mm Elu: 1420mm
1. Ezipụla eriri ahụ, ziga eriri ahụ adịghị, ọkachasị ịdị mma nke eriri mbukota adịghị akwụ ọtọ, eriri mbukota ahụ dị nro, ziga oge eriri ahụ dị mkpụmkpụ, eriri ịchekwa belt adịghị ezu, ndozi oghere ahụ adịghị.
2. Teepu na-anaghị arapara, teepu na-anaghị arapara na-abụkarị ihe na-emegharị emegharị na eriri mbukota, mmezi na-adịghị mma nke isi isi ọkụ, ọnọdụ na-ezighi ezi nke mma dị n'etiti etiti, mmezi na-adịghị mma nke ịdọchi eriri.
3. Nkwụnye nrapado bụ tumadi n'ihi nhọpụta na -adịghị mma nke eriri mbukota nwere oghere na eriri mbukota, yana ndozi na -adịghị mma nke eriri eriri azụ.
4. Nkwakọ ngwaahịa adịghị mkpa bụ ịhazigharị eriri akpa ahụ adịghị mma, mma mma na -ejikọ ihe.
Nke gara aga: Igwe akụrụngwa akara karama nwere akụkụ abụọ
Osote: Igwe nhicha akpaka na igwe mbukota
Onye na -enyocha karama mmanya, Onye na -enyocha karama, Onye na -enyocha karama, Ngwa mbukota akwa, Igwe nyocha akara, Onye na -enyocha karama biya,